Maleeshiyaadka Shabaab oo caruur si qasab ah uga kaxeystay dugsiyada Qur’anka ee tuulada Moqokori | Radio Muqdisho
Maleeshiyaadka Shabaab oo caruur si qasab ah uga kaxeystay dugsiyada Qur’anka ee tuulada Moqokori
Published on January 31, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 2,007 views
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa in ka badan 10 carruur ah si khasab ah uga kaxeystay dugsiyada Qur’aanka ee Tuulada Moqokori si ay ugu adeegsadaan dagaalada ay dalka ka wadaan.
Maleeshiyaadka Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in dugsiyada Qur’aabka ee ku yaala tuulada Moqokori ay ka kaxeysteen in ka badan 10 caruur ah oo aad u da’ yar si ay ugu adeegsadana dagaalada fidnada ah oo ay ka wadaan dalkeena Soomaaliya.
Waalidiinta caruurtaasi ayaa walaac ka muujiyay halka ay ku dambeyndoonto xaalada caruurtooda oo shabaabku ka kaxeysteen dugsiyadii Qur’aanka, iyagoo ka dalbaday dowlada in ay soo gaarto deegaanadooda si ay uga dulqaado gumeysiga argagixisada ka kaxeysaneysa caruurta iyo xoolahooda.
Arrintan qeyb ka ah tacdiyada iyo xadgudubyada ay ku caanbaxeen kooxda argagixisada Shabab, waxeyna kordhiyeen cadaadiska markii laga faramaroojiyay inta badan gobolada dalka oo ay ku dhibaateyn jireen Shacabka Soomaaliyeed.
saciid wadani says:	February 2, 2013 at 1:55 am	ascw wbr aniga wadan keyga wan difacaa dad keyga iyo diin teeyda sidoo kale walaahi shabaab waxa loso diray in e diinta islamka ey kadhigaan diin xun laakiin sas kuma noqoneyso lugahiisa ad umaleyso dawaco uurleh wa kuwii isbaarada dhigan jiray godane,fuadshungule,aweys dahir ,calidhere oo lasoo qaban ma ciil ideyn haa qortaa laga goyn haa markoda godanow somaliland aqonsi wey weysay ee umada kadaa dilka